रेखाको सौन्दर्यप्रति पागल भए यी अरबपति, भिडियो सेयर गरेर खोले मनका कुरा! -बिगुल न्यूज
रेखाको सौन्दर्यप्रति पागल भए यी अरबपति, भिडियो सेयर गरेर खोले मनका कुरा!
पुष १९, २०७४ DS Bigul News
एजेन्सी, बलिउडको पपुलर अभिनेत्री रेखाको चार्म अहिले पनि ताजा नै रहेको छ । हालैमा उनलाई विराट-अनुष्काको मुम्बई रिसेप्‍शन पार्टीमा देखिएको थियो । यहाँ रेखाले बनारसी सिल्क साडीमा आफ्नो जादु चलाएकी थिइन् । आज पनि रेखा करोडौको मनमा रहेकी छिन् । रेखाको सुन्दरताले एक उद्योगपति पनि घायल भएका छन् । यस उद्योगपतिले पहिले पनि रेखाको तारीफ गरेका थिए तर यस पटक ६३ वर्षकि रेखालाई परफर्म गर्दै देखेका अरबपति आनंद महिंद्रा पनि फिदा भएका छन्।
आनंद महिंद्राले ट्वीट गर्दै लेखे,’ मैले मानिसहरुले उमेर त मात्र एक संख्या हो भनेको धेरै सुन्या छु, तर एक तस्वीर या भिडियो हजार शब्दको बराबर हुने गर्दछ । धन्यवाद रेखाजी हामीलाई तपाईको सदाबहार सौन्दर्यको एक झलक देखाएकोमा । ”
वास्तवमा रेखा रियलिटी शो सुपर डान्सरमा पुगेकी थिइन् । यहि उनले एक उत्कृष्ट परफर्मेन्स दिएकी थिइन् । यसमा रेखाले बच्चाहरुको साथ आफ्नो चर्चित गाना ‘इन आंखों की मस्ती के’ बोलमा नृत्य गरेकी थिइन् । ६३ वर्षको उमेरमा पनि उत्कृस्ट नृत्य देखेर आनंद महिंद्राले आफूलाई रोक्न सकेका थिएनन् । हालै रेखालाई स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो ।
प्रकाशित : बुधबार, पुष १९, २०७४१२:४२
अजय देवगनको मराठी चलचित्र ‘आपला मानूस’ को पहिलो पोस्टर यस्तो देखियो!
अब छिट्टै नै ‘महाभारत’ मा देखिदै आमिर खान, यस्तो छ उनको भूमिका !
छक्का पन्जाको रेकर्ड तोड्ने फिल्म ‘लालपुर्जा’ कस्तो होला ?
शाहरुखले आफु र सलमान एकसाथ देख्न २०२० को प्रतिक्षा गर्नुपर्छ भनेपछि…
झगडापछि कपिलले चन्दन प्रभाकरसँग पुनर्मिलन गर्दै यसरी फर्काए ‘शो’मा
यसकारण सबैभन्दा महंगी प्रतिस्प्रर्धी पूजा ‘बिग बोस’ को घरबाट बाहिरीईन् !
चलचित्र क्षेत्रबाट गुमनाम हुँदै आना शर्मा